Ithegi: umthamo wegama eliphambili | Martech Zone
Maka: ivolumu yamagama aphambili
NgoMvulo, nge-10 kaDisemba ngo-2012 NgoMvulo, nge-10 kaDisemba ngo-2012 Douglas Karr
Amagama aphambili lulwimi oluqhelekileyo phakathi kwethemba lakho, iwebhusayithi yakho kunye neziphumo zenjini yokukhangela ofunyenwe kuyo. Zibalulekile ngenxa yokufaneleka kwazo kunye nokukwazi ukuguqula. Kwindawo enjengeMartech, amagama aphambili anokubaluleka ekuqhubeni utyelelo. Kodwa kungenxa yokuba undwendwelo kunye nokuthandwa ngokubanzi ziinjongo zale bhlog. Kwishishini lakho, undwendwelo akufuneki lube sisalathiso sendawo yokusebenza kwindawo yakho, kufanele ukuba ibe lutshintsho lwakho. Mamaxesha amaninzi,
NgoMgqibelo, Disemba 26, 2009 NgoMgqibelo, uJanuwari 8, 2011 UBill Dawson
Abathengisi bachitha inkoliso yeeholide zabo bezotyelwe kwaye betyholwa ngokuthengisa ixesha lonyaka. Emva kokubukela abatshana bam bejonga i-NORAD ngenkqubela phambili kaSanta kwihlabathi liphela, ndacinga ukuba kufanelekile ukubonakalisa igalelo elifanelekileyo lokuthengisa kwixesha leholide. Nangona isambatho esibomvu nomhlophe sikaSanta Claus sasiyinto eqhelekileyo iminyaka embalwa, uHaddon Sundblom wayiqinisa le nguqulo ngokwenza uthotho lwemifanekiso yeCoca-Cola ngeminyaka yoo-1930. Ekuqaleni yayenzelwe ukunceda
Kule veki ndigqibile ukufunda UkuLungisa uLwimi lweeMama: Ukusuka kwi-Olde yesiNgesi ukuya kwi-imeyile, ibali eliTshabalalisiweyo loPelo lwesiNgesi nguDavid Wolman. Awunakukwazi ukuba yeyiphi i-orthography kunye ne-etymology kwaye kulungile. Ndiyazi ukuba ndingusilarha wegrama kunye nopelo, kodwa le ncwadi indenze ndaziva ndibhetele ngakumbi ngezakhono zam. Kukho izigidi zamagama kulwimi lwesiNgesi, kodwa umndilili wesikolo samabanga aphakamileyo uyazi malunga